မွတျစှာဘုရားကိုယျတိုငျ ညှနျကွားခဲ့သော လကျရှိဘ၀မှာ မိဘကြေးဇူးကို အကဆြေပျတဲ့နညျး…. – Youth Bar
မှေးပြံ့နအေောငျ နံ့သာမြိုးစုံနဲ့ လိမျးကြံပေးတယျ။အညောငျးပွအေောငျ ခွလေကျတှကေို ဆုပျနှယျပေးတယျ။အေးတဲ့အခါရနှေေး , ပူတဲ့အခါ ရအေေးနဲ့ရခြေိုး သနျ့စငျပေးတယျ။ပုခုံးထကျမှာ ကငျြကွီးကငျြငယျ စှနျ့စတေယျ။အဲလောကျ ပွုစုလုပျကြှေးပမေယျ့ မိဘကြေးဇူး အကဆြေပျပွီးသား မဖွဈသေးဘူး။
ခဈြသား, ခဈြသမီးတို့ စကားအကုနျပွောရမယျဆိုရငျ စင်ျကဝွတေးမငျး ရာထူးမှာ ထားပွီး ကြေးဇူးဆပျဦးတော့ မိဘကြေးဇူးကို ကအြေောငျ ဆပျရာ မရောကျသေးဘူး။
သားသမီးတှကေို ကွီးပွငျးရှယျရောကျ လူလားမွောကျအောငျဂရုတစိုကျ စောငျ့ရှောကျကွလို့။ နို့ခြိုတိုကျကြှေး မှေးမွူကွလို့။ ဒီလောကကွီးရဲ့ အာရုံကောငျးဆိုး အမြိုးမြိုးကို သိမွငျအောငျ သခြောပွသလို့ပါပဲ။
သဒ်ဓါတရား မရှိတဲ့မိဘကို သဒ်ဓါတရားနဲ့ ပွညျ့စုံအောငျ။သီလမရှိတဲ့ မိဘကို သီလနဲ့ ပွညျ့စုံအောငျ။မပေးရကျ , မလှူရကျ နမွောဝနျတိုတဲ့မိဘကို စှနျ့ကွဲပေးကမျး လှူဒါနျးခွငျးနဲ့ ပွညျ့စုံအောငျ။ပညာဉာဏျ မရှိတဲ့ မိဘကို ပညာဉာဏျနဲ့ ပွညျ့စုံအောငျ
မိဘကြေးဇူးကို အကြေ ဆပျပွီးသား ဖွဈသှားပါတယျ။ဒါဟာ ဘုရားဟော မူရငျး ပါပဲ။မိဘကြေးဇူးဆပျတဲ့နရောမှာလောကနညျးနဲ့ ဆပျခွငျးဓမ်မနညျးနဲ့ ဆပျခွငျးလို့ နှဈမြိုး ရှိပါတယျ။
မိဘအတှကျ အစားအသောကျ , အဝတျအထညျ , နအေိမျတိုကျတာ , ကားရထား စတဲ့ လူမှု အသုံးအဆောငျ ပစ်စညျးတှေ ပွညျ့စုံအောငျ စီမံဖနျတီးပေးတာကို လောကနညျးနဲ့ ကြေးဇူး ဆပျတယျလို့ ချေါပါတယျ။
တကယျတော့လညျး ရှညျလြားလှနျးလှတဲ့ အစမထငျ သံသရာမှာသူက မိဘဖွဈလိုကျ , ကိုယျက မိဘဖွဈလိုကျနဲ့ အပွနျပွနျ အလှနျလှနျ ကငျြလညျနကွေရတာမို့ ဘယျသူ့ကြေးဇူးကို ဘယျသူက ကအြေောငျ ဆပျပွီးပွီ ဆိုတာ ပုထုဇဉျလောကမှာ လုံးဝ မရှိနိုငျဘူး။ဒါကွောငျ့ …
မိဘကို ရုပျပိုငျးဆိုငျရာရော , စိတျပိုငျးဆိုငျရာပါ အဆငျ့အတနျးမွငျ့အောငျကြေးဇူးဆပျနတေဲ့ သားကောငျး , သမီးကောငျးရဲ့ ထံမှောကျကို …
ကံကောငျးခွငျး လကျဆောငျတှေ ” ဝငျလာမစဲ တသဲသဲ ” ဆိုသလို အလုံးအရငျးနဲ့ ဝငျလာမှာကတော့ သခြောပေါကျပါပဲ..။ဆရာတျော အရှငျဆန်ဒာဓိက ( ရှပေါရမီတောရ )
မိဘကျေးဇူးဆပ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဘုရား အဆုံးအမကို ပြောကြပြီဆိုရင် ” မိဘကျေးဇူးကို ဘယ်လိုမှ ကျေအောင် မဆပ်နိုင်ဘူး” လို့ လူအများ ပြောလေ့ ရှိကြတယ်။
အမှန်က “ကျေအောင် မဆပ်နိုင်ဘူး”လို့ ဟောထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ချစ်သား, ချစ်သမီးတို့ ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ရဲ့ ကျေးဇူးကို အလွယ်တကူ ဆပ်ရုံနဲ့ မကျေနိုင်ဘူး။ ကျေအောင် ဆပ်ဖို့ မလွယ်ဘူးလို့ ငါဘုရား ပြောချင်တယ်။ ပုဂ္ဂိုလ် နှစ်ယောက် ဆိုတာ မွေးမိခင်နဲ့ မွေးဖခင် အရင်းအချာကို ပြောတာပါ။
မွှေးပျံ့နေအောင် နံ့သာမျိုးစုံနဲ့ လိမ်းကျံပေးတယ်။အညောင်းပြေအောင် ခြေလက်တွေကို ဆုပ်နှယ်ပေးတယ်။အေးတဲ့အခါရေနွေး , ပူတဲ့အခါ ရေအေးနဲ့ရေချိုး သန့်စင်ပေးတယ်။ပုခုံးထက်မှာ ကျင်ကြီးကျင်ငယ် စွန့်စေတယ်။အဲလောက် ပြုစုလုပ်ကျွေးပေမယ့် မိဘကျေးဇူး အကျေဆပ်ပြီးသား မဖြစ်သေးဘူး။
ချစ်သား, ချစ်သမီးတို့ စကားအကုန်ပြောရမယ်ဆိုရင် စင်္ကဝြတေးမင်း ရာထူးမှာ ထားပြီး ကျေးဇူးဆပ်ဦးတော့ မိဘကျေးဇူးကို ကျေအောင် ဆပ်ရာ မရောက်သေးဘူး။
ချစ်သား , ချစ်သမီးတို့ ဒီလောက်ကျေးဇူးဆပ်ရဲ့သားနဲ့ ဘာလို့ ကျေးဇူး မကျေနိုင်ရတာလဲ ? ဆိုရင်မိဘတွေဟာ သားသမီးတွေအပေါ် သိပ်ကို ကျေးဇူးများကြလို့ပဲ။
သားသမီးတွေကို ကြီးပြင်းရွယ်ရောက် လူလားမြောက်အောင်ဂရုတစိုက် စောင့်ရှောက်ကြလို့။ နို့ချိုတိုက်ကျွေး မွေးမြူကြလို့။ ဒီလောကကြီးရဲ့ အာရုံကောင်းဆိုး အမျိုးမျိုးကို သိမြင်အောင် သေချာပြသလို့ပါပဲ။
ချစ်သား , ချစ်သမီးတို့ မိဘကျေးဇူး အကျေဆပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ငါဘုရား ညွှန်ပြပါရစေ။
သဒ္ဓါတရား မရှိတဲ့မိဘကို သဒ္ဓါတရားနဲ့ ပြည့်စုံအောင်။သီလမရှိတဲ့ မိဘကို သီလနဲ့ ပြည့်စုံအောင်။မပေးရက် , မလှူရက် နမြောဝန်တိုတဲ့မိဘကို စွန့်ကြဲပေးကမ်း လှူဒါန်းခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံအောင်။ပညာဉာဏ် မရှိတဲ့ မိဘကို ပညာဉာဏ်နဲ့ ပြည့်စုံအောင်
မိဘကျေးဇူးကို အကျေ ဆပ်ပြီးသား ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါဟာ ဘုရားဟော မူရင်း ပါပဲ။မိဘကျေးဇူးဆပ်တဲ့နေရာမှာလောကနည်းနဲ့ ဆပ်ခြင်းဓမ္မနည်းနဲ့ ဆပ်ခြင်းလို့ နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။
မိဘအတွက် အစားအသောက် , အဝတ်အထည် , နေအိမ်တိုက်တာ , ကားရထား စတဲ့ လူမှု အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းတွေ ပြည့်စုံအောင် စီမံဖန်တီးပေးတာကို လောကနည်းနဲ့ ကျေးဇူး ဆပ်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။
စိတ်ထားမတတ်တဲ့မိဘ စိတ်ထားတတ်အောင်..ကုသိုလ် နည်းပါးတဲ့ မိဘ ကုသိုလ် တိုးပွားအောင် ကူညီပံ့ပိုးပေးတာကို ဓမ္မနည်းနဲ့ ကျေးဇူး ဆပ်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။
တကယ်တော့လည်း ရှည်လျားလွန်းလှတဲ့ အစမထင် သံသရာမှာသူက မိဘဖြစ်လိုက် , ကိုယ်က မိဘဖြစ်လိုက်နဲ့ အပြန်ပြန် အလှန်လှန် ကျင်လည်နေကြရတာမို့ ဘယ်သူ့ကျေးဇူးကို ဘယ်သူက ကျေအောင် ဆပ်ပြီးပြီ ဆိုတာ ပုထုဇဉ်လောကမှာ လုံးဝ မရှိနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့် …
ကျေးဇူးကျေတာ , မကျေတာကို အဓိက မထားဘဲ ” ကျေးဇူးဆပ်နေဖို့ အဓိက” လို့ နှလုံးသွင်းပြီးလောကနည်းနဲ့ရော ဓမ္မနည်းနဲ့ပါ မိဘကို အမြဲ ကျေးဇူး ဆပ်နေဖို့ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။
မိဘကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော , စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ အဆင့်အတန်းမြင့်အောင်ကျေးဇူးဆပ်နေတဲ့ သားကောင်း , သမီးကောင်းရဲ့ ထံမှောက်ကို …
ကံကောင်းခြင်း လက်ဆောင်တွေ ” ဝင်လာမစဲ တသဲသဲ ” ဆိုသလို အလုံးအရင်းနဲ့ ဝင်လာမှာကတော့ သေချာပေါက်ပါပဲ..။ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိက ( ရွှေပါရမီတောရ )